Madaxweynayaal caan ka ah Geeska Afrika oo ku sii jeeda Puntland & Ujeedada socdaalkooda.
ADDIS ABABA(P-TIMES) – Wararka naga soo gaaraya magaalada Garoowe ee caasumada Puntland ayaa sheegaya in todobaadkan ay magaaladaas ku wajahan yihiin wafdi sare oo kasocda dawladda Itoobiya oo ay hogaaminayaan madaxda dawlad gobaleedyada Oromada iyo Soomaalida oo tagaya Puntland.
Madaxweynayasha labada Ismaamul oo ay wehlin doonaan xubno katirsan Xaafiisyada Madaxweynaha, Raysalwasaaraha iyo Wasaaradda Ganacsiga ee Itoobiya ayaa ka qeybgalaya kulanka maalgashiga Puntland oo ka dhacaya magaalada Garoowe.
15-ka bishan ayaa lafilayaa in uu furmo kulanka maalgashiga oo ay ka qeybgali doonaan maalgaliyayaal kala duwan iyo marti lagu casumay, waxaana lafilayaa inta uu socdo in ay hadalo kala duwan ka jeediyaan madaxda kasoo qeybgalaysa.
Tanni waa fikradii uu la yimi Madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni oo la doortay 9 bilood kahor ,waxaana kulamadan ay noqonayaan kuwa ay dad badan oo ku nool Puntland ka heli doonaan fursado shaqo.
Warar hoose ayaa sheegaya in madaxdan ay kala hadli doonaan Puntland, sidii Iskaashiga dhinacyada ammaanka, dhaqaalaha iyo sidii ay u yeelan lahaayeen iskaashi dhaw, waxaana la filayaa in ay kala saxiixdaan heshiisyo ku wajahan arrimaha dhinacyadan ka dhaxeeya.
shirka malgashiga waxaa ku xiga cidamadii bada loo tababaray ee ithuopiya oo lakanayo badaha pudland pudtland kilinka6 waa halka ay ka bilabmayso midanyta somali iyo xabashi
alow sahal amuuraha hadii xabashidu pudland gacanta ku dhigto inta kale ee somali konfur horaba gacanta xabashida ku jirtay midnimada xabashida ee abye axmed iyo khayre wadaan
waa sidan madaxwaynaha oo fadhigisu noqonayo adisababa oo noqonaysa casimada labada wadan farmajo oo laga dhigayo madaxwaynaha oo aan awood lahayn khayre oo noqonaya raisalwasaraha somaliya abye axmed oo ahanaya rasalwasaraha ithoupiya casimada labaad oo muqdisho noqonaysa Somaliland oo laga qadayo afti taas oo cadaan ah in la donayo in waixii somaliya la odhan jiray ay ka soo hadho somailand alow sahal amuraha
Waa ra,yigaaga. taas adaaba sheegaya, wadankaan waa hore ayaa gacanta lagu dhigay, Soamlilanta aad shegeysana maba garaneyno meesha ay tahay, waa Caadifad mindhaa aad isaaq u haysaa, meeshaan Somaliyi wey is maamuli weydey waana la maamulayaa.